होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… – Wow Sansar
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि…
December 28, 2020 647
काठमाडौ । प्रहरीले कल गर्लको पर्दाफास गरेको छ । पुरानो स्टेशनको पछाडि होटेल रुद्र इन होटलमा छापा मारेपछि प्रहरीले व्यवस्थापकलाई प’क्राउ गरेको हो । घटना नेपालको सीमा नजिकको भारत, उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको विभूतिखण्डको हो । यस प्रकरणमा अर्को राज्यका केटीहरू रहेका छन् ।
प्रहरी आयुक्तले घटनाको अनुसन्धान एसीपी विभूतिचन्द स्वन्तेर कुमार सिंहलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । एसीपी विभूतिचन्द स्वतन्त्र सिंहका अनुसार प्रहरी टोलीले आइतबार राती होटल रुद्र इनमा छापा मारेको थियो । चार केटीहरू विभिन्न कोठामा भेटिएका हुन् । सबै केटीहरूलाई अर्को राज्यबाट बोलाइएको थियो ।
महिलाहरूले आरोप लगाए कि होटल प्रबन्धक र अन्य व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई गलत काम गर्न बाध्य तुल्याएका थिए । प्रहरीले ती केटीहरूलाई त्यहाँबाट छुटाउन सफल भएको छ । होटल प्रबन्धक विवेक पाण्डेलाई प’क्राउ गरिएको छ । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार यस र्‍याकेटमा धेरै भीआईपी व्यक्ति जोडिएका छन्, जसको खोजतलास चलिरहेको छ ।
एसीपीका अनुसार पूनम नामकी महिलाले आफ्ना साथीहरूलगायत जबरजस्ती गल्ती गरेको कुरा एसीपीले पत्ता लगाएको थियो । उक्त गिरोहमा दीपक नामका एक युवक पनि थिए । पूनम र दीपकलगायत अन्य बिचौलियाको खोजीमा प्रहरीले छापा मारेको छ । स्वतन्त्र महिलाको बयानका आधारमा चार जनाको बि’रूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रहरी आयुक्त डीके ठाकुरलाई केहि दिन अघि यसका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । जानकारी दिने व्यक्तिले चार अर्कै राज्यका युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएर ष्ल गर्ल पेसामा लगाएको बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरी आयुक्तले डीसीपी पूर्वलाई अनुसन्धान एसीपी विभूतिखण्ड समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिए । एसीपीले यस बारे थप जानकारी प्राप्त गर्यो । यस पछि, सबै चार महिलालाई उक्त स्थानबाट मुक्त गरिएको हो ।
Prevअन्ततः पूरा भयो श्री कृष्णका डुब्लिकेट प्रकाशको हिरो बन्ने सपना; (भि”डियो हेर्नुस्)
Nextविवाहको २ दिन पछि नै जब गौहरले भेटिन् पूर्वप्रेमी कौशललाई, कौशलले भने, ‘हेर मेरो किस्मत’ (भिडियो हेर्नुस्)
यि नर्स जसले अस्पतालको शौचालयमा कोरोना सं’क्रमित,सँग यौ*न स;म्पर्क गर्ने हिम्मत बटुलिन्, पीपीई फु,का,लेपछिको भिडियो भाइरल भएपछि परिन् का,रवा,हीमा , जागिर चट
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3348)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1132)
नआत्तिनुस् यो मितिमा नतिजा प्रकाशन हुने भन्दै एका बिहानै NEB बाट आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
टिकटकमा युवतीहरूको अनेक ‘हर्कत’, हेर्न पनि लाजैभो (भिडियोसहित)
केटी देख्नै नहुने यी कस्ता श्रीमान्! कान्छी भित्राउन नदिदा लिए श्रीमतीको ज्या’न (भिडियो सहित